minthantzaww: Facebook ကြီးသာ ပိတ်သွားခဲ့ရင်ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ ... ... ?
Facebook ကြီးသာ ပိတ်သွားခဲ့ရင်ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ ... ... ?
Facebook သုံးရင်းနဲ့ ဒီသတင်းလေးတွေ့လို့ သူငယ်ချင်းတို့ဆီ ကူးယူ မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ သတင်းအမှန် ဟုတ်မဟုတ် မပြောနိုင်သေးပါ။ အကယ်၍ Facebook သာ မရှိတော့ရင် ဆိုသည့်အတွေးဖြင့် Facebook ပရိသတ်တွေကို သွေးတိုးစမ်းသည့် သတင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အမှန်တကယ် သတင်း အစစ်အမှန်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ... ... ...
Credit to = http://strawberrywine.ning.com/profiles/blogs/facebook-end-march15 and from facebook's friends Avan Wang (王天) & John Htoi Aung မှော်ဆ၇ာမေလ်းမှတဆင့်ဝေမျပါသည်
Posted by minthantzaww at 08:00
i think it was justafake new.. so dun worry... :) Pls check here..Some people are bloody good at spreading hoax! http://www.blogtechnical.com/286/facebook-shut-down-hoax-spreads-like-fire.bt